Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » World Drag Racing: Torrence Racing Manatevin-daharana ny ekipa Toyota
Torrence Racing dia hiditra amin'ny ekipa Toyota manomboka amin'ny vanim-potoana 2022 NHRA Camping World Drag Racing Series. Ny fampidirana ny ezaka ataon'ny ekipa roa an'i Torrence Racing dia manitatra ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa Toyota mba hahitana dragsters Top Fuel dimy sy fiara mahatsikaiky roa.
"Torrence Racing dia mpitarika amin'ny fifaninanana NHRA, ary manantena ny hitondra an'i Steve sy Billy ho ao amin'ny fianakaviana Toyota izahay amin'ny 2022," hoy i Paul Doleshal, mpitantana ny vondrona, Motorsports sy Assets, Toyota Motor Amerika Avaratra (TMNA). “Manana mpamily sy mpiara-miasa mahatalanjona amin'ny ekipa NHRA izahay. Ny fampidirana an'i Steve sy Billy Torrence dia hanatsara izany filaharana miavaka izany ihany. ”
Torrence Racing dia hery natanjaka indrindra tao amin'ny NHRA tato anatin'ny taona vitsivitsy. Steve dia nandresy fandresena 49 tamin'ny hetsika kariera 263 ary tompon-daka telo amin'ny Fitrandrahana Solika. Amin'ity vanim-potoana ity, nandresy sivy si Steve ary izy no mpitarika isa ankehitriny. Ny rainy, Billy, dia nandresy indroa tamin'ity taona ity ary in-valo tamin'ny asany. Na eo aza ny fihazakazahana fandaharam-potoana, i Billy dia fahadimy amin'ny filaharana teboka ankapobeny.
Toyota dia manome ny ekipany NHRA miaraka amina fiarakodia, miaraka amin'ny injeniera, ny haitao ary ny fanohanana amoron-dalana amin'ny alàlan'ny TRD (Toyota Racing Development). Ho fanampin'ny Torrence Racing, Toyota dia hanohy hanohana ny ekipa vao naorin'i Antron Brown - ny AB Motorsports, DC Motorsports ary ny ekipa ekipa telo an'ny Kalitta Motorsports amin'ny 2022.
"Nahazo fitahiana aho noho ny fahombiazako tamin'ny asako NHRA, saingy tsapako fa ity fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'i Toyota sy TRD ity dia hanatsara ny zavatra azon'i Torrence Racing atao eo amin'ilay lalana", hoy i Steve Torrence. “Hitako manokana fa ireo mpamily sy ekipa mifandraika amin'ny Toyota dia tsy ampahany amin'ny lisitra misy azy fotsiny fa ampahany amin'ny fianakaviana. Mpanamboatra manokana mametraka ny olona ho lohalaharana izy ireo, ary izany no karazana fiaraha-miasa izay eken'ny ekipanay ho anisan'ny manomboka vanim-potoana ho avy. ”
Steve sy Billy Torrence dia manatevin-daharana ny laharana mpamily Toyota izay misy tompon-daka nandritry ny NHRA Top Fuel intelo i Brown, Alexis DeJoria mpandresy US Nationals, nandresy tamin'ny hazakazaka 49-taona Doug Kalitta, Tompondakan'ny lasantsy voalohany Shawn Langdon ary JR Todd tompon-daka tamin'ny Funny Funny 2013.
Toyota mankalaza ny andiany faha-20 ao amin'ny NHRA amin'ity taona ity. Ny mpamily Toyota dia nandresy hazakazaka 137 Top Fuel sy 43 Funny Car niaraka tamin'ny enin-doha Top Fuel ary fiadiana tompon-daka Lucu telo nandritra ny andiany.